कस्तो कलेज छनोट र किन ? - Shiksha Sansar
काठमाडौँ । काठमाडौँको भृकुटिमण्डप स्थित प्रदर्शनी मार्गम हिजो सम्म संचालनमा रहेको शिक्षा मेलामा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका धेरै स्कुल तथा कलेजहरुको सहभागी रहेको थियो । ती कलेज तथा स्कुलका पदाधिकारीहरुलाई शिक्षा संसारका संवाददाता अर्जुन आचार्यले विद्याथीले तपाईकै कलेज तथा स्कुल किन रोज्ने ? तथा आगामी योजनाहरु के रहेका छन् ? भन्ने प्रश्नमा त्यहाँ सहभागी मध्य केही कलेजहरुले दिएको जवाफको सारांश :
व्यहारीक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छौंः
रविन श्रेष्ठ प्रध्यानाध्यापक,ह्वाईट हाउस कलेज, ललीतपुर
कलेज स्थापना भएको एक दशक भन्दा बढि भयो । भन्नलाई त सबैले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ भन्छन् । तर हामीले के गछौँ भन्दा विद्यार्थीहरुलाई घोकाएर भन्दा पनि उनीहरुले आफैले बुझेर पढ्नु जुन पढेको कुरा जीवनमा पछि काम लागोस । पढ्ने भनेको अहिले पास गर्नको लागी मात्र होइन जीवनमा पछि पनि प्रयोगमा ल्याउने हिसावमा पढाउछौँ ।
उनीहरुले आफैले बुझेर पढुन्, उनीहरुले आफैले नोट बनाउन सकुन्, भन्ने हिसावमा पढाउछौँ र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कसुर छाडेका छैनौ । हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले बुझाएर भन्दा पनि उनीहरु आफैले वुझेर पढ्ने वातावरण गराएका छौँ ।
एसइइ अथवा प्लस टु दिएर आउने नयाँ विद्यार्थीलाई कस्तो व्यबस्था छ ?
एसइइ दिएर कुनै पनि सामुदायिक स्कुलबाट आएको छ भने हामीले उनीहरुलाई सय प्रतिशत नै छात्रवृतिको व्यबस्था गरेका छौँ, त्यस्तै चार जिपिए ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई पनि सत प्रतिशत छात्रवृतिको व्यबस्था छ । अनि ३.८ देखि ३.९९ आउनेहरुलाई पनि ७५ प्रतिशत छुटको व्यबस्था गरेका छौँ ।
यतिमात्र नभएर हामीसँग धेरै कुराहरुमा विद्यार्थीहरुलाई छुट दिरहेका छौ कुनै विद्यार्थी पढ्न चाहान्छ तर उसको पारिवारको आर्थिक स्तर कमजोर छ भने पनि हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई छात्रावृतिको व्यबस्था गरेका छौँ । त्यस्तै कक्षा ११ मा कुनै विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा ल्यायो भने पनि हामीले उसलाई छात्रावृतिको व्यबस्था पनि गरेका छौँ ।
फार्मेसी, पव्लीक हेल्थ तथा ल्याव लगाएत सबै विषयका दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरुबाट पढाइ गराउँछौ :
दिपेश जोसी, लेक्चर, मोडन टेक्नीकल कलेज, सानेपा ललितपुर
हाम्रो कलेज चाहीँ सानेपा हाईट रिङरोडमा अवस्थित छ । हाम्रो कलेज स्टार गु्रपद्धारा संचालीत हो । जसमा स्टार हस्पिटल, स्टार एकेडेमी, मोडन टेक्निकल कलेज, सबै स्टार ग्रुपले नै संचालन गरेको हो । हाम्रो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो । त्यसमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन वटा विधाहरु संचालन गर्दै आएका छौँ । वि एम एल डि, वि फार्मेसी, बि.पि.एच, सबै चार वर्षका कार्यक्रमहरु हुन् ।
यसलाई चार वर्षमा आठ समेस्टरमा बाडिएको छ । कलेज चाही सन् २०१० सालमा स्थापना भएको हो । स्थापनाकालको सुरुवाती अबस्थामा वि एम एल टि, बाट सरुवात गरेका थियौँ भने फार्मेसी र वि पि एच कार्यक्रम संचालन गरेको एक वर्ष भयो । पहिलो समेस्टरमा नै छौ पास आउट भएको छैन ।
वि एम एल टि ले नै हाम्रो कलेजको अबस्था दर्शाउ भनौ वि एम एल टि मा हाम्रो कलेले युनिभर्सिटि टप गरेका छौेँ । यसले पनि हाम्रो पढाइको गुणस्तर कस्तो छ भनेर झल्काउँछ । यसका साथ साथै हामीसँग व्यस्थीथत र गुणस्तरीय संकायहरु पनि छन् । नेपालको टप मेडिकल कलेजहरुबाट अध्ययन गरेका, भारतका टप मेडिकल कलेजबाट त्यस्तै गरी बङ्लादेशका उत्कृष्ट कलेजहरुबाट अध्ययन गरेका दक्ष शिक्षकबाट फार्मेसी पव्लीक हेल्थ तथा ल्याव लगाएत सबै विषयका दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरुबाट पढाइ गराउँछौ ।
उहाँहरु सबै शिक्षा क्षेत्रमै लागीरहुभएका अनुभवी व्यक्तीहरु हुनुहुन्छ । त्यसै गरी हामीले विद्यार्थीहरुको पढाई सँगसँगै अन्य क्रियाकलापहरुमा पनि ध्यान दिन्छौ, खेलकुद, विद्यार्थी इच्छा के मा छ त्यसमा हामीहरुले धेरै ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यस्तै गरी हामीले विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाहरुमा पनि धेरै ध्यान दिएका छौँ ।
हामीहरुले विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक एउटा कम्पिलिट प्याकेजको रुपमा हामीहरुले कार्यक्रम संचालन गरेका छौँ जसले गर्दा विद्यार्थीहरु निस्किदा दक्ष भएर निस्किन्छन् जसले गर्दा हाम्रो कलेजको गुणस्तरलाई विद्यार्थीहरुले झल्काउन् ।
विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गछौँ :
मोहन गिरी,प्लस टु कोअर्डिनेटर, हिम्स कलेज, नारायणटार, जोरपाटी काठमाडौँ ।
हाम्रो स्कुल स्थापना भएको २५ वर्ष भयो भने प्लस टु स्थापना भएको १३ वर्ष भयो । हाम्रो कलेजमा पढाई सँगसँगै भौतिक पुर्वाधारहरुको व्यबस्था पनि छ । भौतिक पुर्वाधार भन्नाले हाम्रा विद्यार्थीई, फुटबल, बास्केटबल, स्वीमिङ पुल, लगाएत का अन्य कुनै पनि क्रियाकलाप गराउनको लागी विद्यार्थीहरुलाई बाहिर लाग्नु पर्दैन यी सबै सुविधाहरु विद्यार्थीहरुलाई हामी प्रदान गरेका छौँ । त्यती मात्र नभएर विद्यार्थी मैत्री वातावरण पनि हाम्रो स्कुल कलेजमा रहेको छ । विगतका दिनहरुमा पनि हामीले अत्यन्तै राम्रो नतिजा ल्याएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
सन् ०१४र ०१५ मा एभ ए सीवीमा करिव चाहजार विद्यालयहरुमा हाम्रो विद्यालय २३ औँ स्थानमा थियो भने सन् ०१६र ०१७ मा हामी ७ औँ स्थानमा आएका थियौँ । त्यसकारण हाम्रो प्लस टु काृे नतिजा पनि अत्यन्तै राम्रो छ ।
हाम्रो स्कुल तथा कलेज भनेको धरै सम्भावन बोकेको कलेज पनि हो । हामी एउटा निश्चित स्थानमा मात्र सिमित हुनुहुदैन भन्ने सोच लिएर लिएर हामी यस शैक्षिक मेलामा समावेश गरेका हौँ । हामीले यहाँ मेलामा सहभागी हुदाँ उत्साहित पनि भएका छौँ ।
विद्यार्थीहरुलाई सस्तो सुलभ र रोजगार मुलक शिक्षा दिने हाम्रो उद्देश्य हो :
नरहरी घिमिरे, कलेज,प्रमुख, जि.एस कलेज, ललीतपुर
हाम्रो अहिले के भनिएको छ भने नेपालमै उच्च शिक्षा भन्ने कुरा भएको छ । नेपालको उच्च शिक्षा के छ भने हामी बाहिर किन जाने नेपालमै हामीले उच्च शिक्षा दिन्छौ भने हाम्रो निचोड छ । रोजगार मुलक शिक्षा दिन हामी सक्षम छौँ । हामीले विद्यार्थीहरुलाई सस्तो सुलभ र रोजगार मुलक शिक्षा दिने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यही अनुरुप हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ । त्यसमा हामीले शतप्रतिशत छात्रावृतिको व्यबस्था पनि गरेका छौँ ।
ए प्लस ल्याउनेलाई हामीले सतप्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यबस्था पनि गरेका छौँ । हामी झुट कुरा बोल्दैनौ, हामीले बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउँछौँ । हाम्रो धारणा अरु भन्दा केही फरक छौँ जस्तो लाग्छ । हामीले यस मेलामा आफुले केही गरेका गरेका छैनौ विद्यार्थीहरुले जे जाने बुझेका छन् त्यही यहाँ आउनेहरुलाई भनिरहेका छन् अरुमा शिक्षकहरु आफै पनि बसकेका छन् तर हामी बसेका छैनौ त्यसैले पनि हाम्रो विचार नै अरु भन्दा छ जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो कलेज शान्त र विद्यार्थी मैत्री वातावरण भएको कलेज हो । विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागी लाइवेरी, बस्नको लागी होस्टेलको सुविधा पनि हामी सँग छ । विद्यार्थीहरुलाई बस्न र खेलहरु खेल्नको लागी पनि प्रशस्त मात्रमा ठाँउहरुको व्यबस्था पनि हाम्रो कलेजमा रहेको छ । अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि निकै फस्टाएको छ ।
त्यसलाई पनि हामीले राखेका छौँ । आर्थिक अबस्था कारण बिदेशमा पढ्न नसकिरहेका र नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोचाइ भएका विद्यार्थीहरुलाई हामीले सस्तो सुलभ शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ । त्यस्तै गरी हाम्रो विद्यालयमा विज्ञान, व्यवस्थापन, र मानविकी संकायको पढाई समेत हुन्छ ।
हाम्रो कन्सल्टेन्सिमा एउटा लिमिट जसमा हामी खुसी छौँ : नेपाल एडुकेशन कन्सल्टेन्सि प्रवन्धक निर्देशक थरेन्द्र राज अधिकारी
सात हजार संख्यामा लोकसेवा खुल्दैछ : लोकसेवा आयोग प्रवक्ता, किरणराज शर्मा
च्याउ उर्मे जस्तो उर्मेका इन्टिच्यूटहरु यहाँ धेरै छन, जो केही समयपछि आफै हराएर जान्छन् : निम्स इन्टिच्यूट प्रवन्धक निर्देशक रामचन्द्र गौतम
हामीहरु स्कुलिङ भन्दा पनि बैंकलाई निर्देशन जारी गर्छौः नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवक्ता,लक्ष्मी प्रपन्न निरौला